Socdaalkii Cagaaraa Oo Galiil Kusoo Afmeermay - Cakaara News
Socdaalkii Cagaaraa Oo Galiil Kusoo Afmeermay
Jigjiga(CN) Sabti, 5ta December 2015, Kadib dkeelmashadii xalay ee dhagaxbuur iyo furitaankii saaka ee shirka arimaha xisbiga iyo maaliyadaha degmooyinka ayay madaxwaynaha iyo waftigiisu usoo dhaqaaqeen dhanka magaalada jigjiga iyagoo kormeer ugu leexday ceel riig ah oo laga qoday qabalaha galiil oo hoos yimaada degmada Ararso.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo kahadlay ceelkan ayaana sheegay in wakhtiga lagu qoday ceelkan ay dhan tahay 20 casho. Miisaaniyada kubaxdayna ay tahay 5milyan. Madaxwaynaha ayaa carabka kudhuftay in ceelkani aad u biyo badan yahay oo uu ilbidhiqsigiiba tuurayo in kabadan 100 litir oo biyo ah. Wuxuuna intaa raaciyay in laga biyo galin doono kasokow galiil, cobole, geedi-aar ilaa dhagaxbuur.
Shacabka qabalahan galiil dagan ayaana si wayn usoo dhaweeeyay ceelka ay xukuumadu u qoday.
Hadaba madaxwaynaha oo dareenkiisa cabiraya ayaa sheegay inuu runtii aad ugu faraxsan yahay qodida ceelkan iyo wakhtiga lagu qodayba. Wuxuuna u mahadceliyay shirkada biyaha ee waaheen oo ah shirkada qoday ceelkan oo deegaanka laga leeyahay, shaqaalaheeda iyo waliba xafiiska biyaha DDSI. Madaxwaynaha ayaana hadalkiisii kusoo xidhay in socdaalkii cagaaraa uu kusoo gabagaboobay qabalaha galiil ceelka laga qoday oo runtiii ah mid cagaar muujinaya.
Ugudanbayna, waxaa lawajahay dhanka magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka.